Sahityabatika: अनर्थ भयो ? (गजल)
अनर्थ भयो ? (गजल)
पालुवा पलायो अनर्थ भयो ?
बसन्त आयो अनर्थ भयो ?
महल मै छ त उसले कसरी ?
न केहि पायो अनर्थ भयो ?
हिजो मेरो अघी भन्थ्यो उ यस्तो
यो मान्छे अस्तायो अनर्थ भयो ?
रजनीमा रम्ने हरु भन्दा हुन
रात पनी उदायो अनर्थ भयो ?
बादल र बर्षा निलो गगनमै
"मौसम" हरायो अनर्थ भयो ?
२०११ मे ४